Thola izixhumanisi ezingenayo kalula ngeBlekko | Martech Zone
NgoMsombuluko, Mashi 19, 2012 NgoMsombuluko, Mashi 19, 2012 Douglas Karr
Kukholwe noma ungakukholwa, i-Google akuyona ukuphela kwenjini yokusesha emhlabeni. Enye yazo eye yasiza kakhulu lapho senza ucwaningo lwethu kuma-backlinks esiza yi Blekko. Kulula njengokungeza i- / kwangaphakathi ngemuva kwegama lesizinda:
Umphumela okukhiphayo ukukunikeza ngezixhumanisi eziya kusayithi lakho kanye nombhalo wehange osetshenzisiwe lapho ubhekisela kuwo.
UBlekko uzophinde abike okuqukethwe okuyimpinda kanye nezixhumanisi eziphumayo, futhi!
Tags: ama-backlinksizixhumanisi zesizindaizixhumanisi ezingenayobheka izixhumanisi zesizinda